01 Nov, 2019 | Posted By: staff reporter | Estimated reading time 3 minutes
MUDZIMAI ane makore 35 okuberekwa anogara kuHatfield, muguta reHarare, asi kumusha achibva kuChivhu, anoti ane dambudziko rekubooka-booka kusikarudzi yake uko kwakadzidziuka ronda hombe rinobuda honye mhenyu idzo dziri kumudya achifamba.
Mudzimai watichangodoma nezita rake rekutanga rekuti Patience, sezvo achikumbirisa kuti zita rake rose risabuditswe, anoti a
svitsa gore nemwedzi mitanhatu achidyiwa nehonye pamadiro. Honye idzi dzine ruvara rwakasiyana runosanganisira nhema, tsvuku nechena uye dzine miswe mirefu nemisoro mihombe inenge yemazunguzurwa.
“Ndiri kudyiwa nehonye ndichifamba, ndiri mupenyu. Izvi zvakatanga mushure mekunge ndashaya chipfeko changu chemukati. Bhurugwa rangu rakabiwa nemunhu wandinofungira kuti igirlfriend yemurume wangu. Kubva ipapo, ndakatanga kuita buri rimwechete kunhengo yangu ndokuzowedzera kuita maburi matanhatu ayo akazodzidziuka kuita ronda hombe,” anodaro Patience.
Anoti ronda iri rinodhubhuka honye kunyangwe pane vanhu izvo zvaanoti anotoguma atiza paruzhinji kunodziuraya ari pakavandika.
“Ndakaroorana nemurume wangu kwemakore mashanu uyo ndisina kuita mwana naye. “Asi ndine wangu wandakaita nemumwe murume, iyewo ane wake waakaitawo nemumwe mukadzi. Ndatanga kudyiwa nehonye idzi, murume wangu akabva atiza pamba nembatya dzake ndisipo, handina kuzomuona kusvika nanhasi uno.
“Ndakamboenda kuzvipatara nekuda kwechirwere ichi, kusanganisira kuParirenyatwa Group of Hospitals, kuKaranda, kuWilkins nekuMbare asi kukashaikwa chirwere chaicho, vanongonditi ndirambe ndichidzoka,” anodaro.
Dzimwe nguva, Patience anoti anozongoerekana ave kuona honye idzi dzave kudonha paari inova nyaya yaanoti inomunyadzisa zvikuru.
“Handizive kuti ndichararamawo here kubva mudambudziko iri. Kumaporofita nen’anga kwandinofamba zvinonzi ndakaiswa mhiko apo ndakabirwa chipfeko changu chakanogadzirwa.”
Patience anogara oga achiroja uye anozvigeza pasina anokwanisa kumubikira sezvo asisagone kufamba zvakanaka.
“Takaberekwa takawanda ini ndiri musikana ndoga uye baba vakafa, amai vangu vanoshanda basa remumba kuBotswana uko vakadzokera svondo rakapera. Dzimwe hama dzose, kusanganisira dzekwaamai vangu, hapana anoda kundibatsira kana kundishanyira chaiko. Ndinobatsirwa nevavakidzani avo vanombondipa kudya nekundiwachira, ronda iri rave kubuda mvura nehurwa uyewo naidzo honye,” anodaro Patience. Mishonga yaanoda yekugezesa ronda iri anoti haana kuburikidza nekushaya mari. Patience anoti ari kurara akasvinura nekurwadziwa neronda.
Kune vanoda kubatsira Patience vanomubata panhamba dzinoti 0772 514 874.
Votaura pamusoro penyaya iyi, VaPatrick Kapfunde avo vanozivikanwa nekuti Sekuru Bhaureni vekwaMadondo, kuMt Darwin, vanoti mudzimai uyu akashandisirwa chipfeko chake chikaiswa mhiko dzemishonga yakaipa.
“Akaiswa mhiko dzechikwambo chinodya nyama yake.
“Dzimwe nguva anogona kunge akarara nemurume wemunhu akaiswa rukawo,” vanodaro.
Mashoko avo anotsinhirwa naSekuru Chirume Chirume vekuEast View kuCaledonia, muHarare vachiti Patience anogona kunge akaroyiwa kana kuti akagadzirwa neaiva murume wake kana nechikomba chake.
“Nyaya yave kudiwa kubatsira munhu uyu chete asi akaroyiwa zvakasimba,” vanodaro. Kuchiti Madzibaba Bonservia Bond Gumira (31) vechechi yeJohane Masowe weChishanu, yekuChitungwiza vanoti mukadzi uyu akaiswa chikwambo chinomudya.
600 voitwa vakadzi nenyoka
VANHUKADZI vanosvika 600 vekuShale, kudunhu reMzingwane, vari kupupura kuti pane nyoka inopota ichivananzva kusikarudzi dzavo isati yazovaita vakadzi.
Manenji aya ari kuitika kuWard 8, kuShale, mubhuku raDindindi Gante, kwaMambo Mathe.
Vakadzi ava vakaudza mamwe maporofita kuti kwenguva yakareba, vaishinhwa navo nenyoka yemashiripiti iyi. Nekuda kwedambudziko ravakatarisana naro, vakadzi ava vakasvika pakubhadhara maporofita echikwata chinodaidzwa nekuti Izithunywa zenkosi mari inosvika $1 800 nechinangwa chekuti vavachenure.
Muhurukuro dzakasiyana, madzimai aya anotsanangura kuti nyoka iyi yagara ichishereketa navo sei.
Vanoti vanonzwa kungoneta-neta kana huri husiku apo vanenge varere, mushure mekanguva ndipo pavanozonzwa vonanzwa nekushinhwa navo.
Vamwe vanoti vanoona mufananidzo wenyoka, vozotanga kuvaviwa kusikarudzi dzavo. Nobuhle Moyo anoti akambomuka asina chipfeko chake chemukati.
“Ndaimuka ndichinzwa kuneta sekunge ndainge ndasangana nemurume. Pekutanga, ndakafunga kuti ndarota murume wangu uyo ari kuSouth Africa. Asi zvakaramba zvichiitika uye zvakazoitika zvakare papera masvondo maviri, ndizvo zvakazoita kuti nditsvage muporofita uyo akazotaura kuti pane nyoka inoshereketa neni. Ndakamuti abvise nyoka iyi asi akazvitadza,” anodaro Moyo.
Anita Chiimba anotiwo anonzwa kunanzvwa nechinhu chinenge nyoka.
“Kana ndirere ndinonzwa chinhu chinenge nyoka chichifamba pamusoro pangu, pashure pezvo chinotanga kundinanzva sikarudzi. Panguva imwe chete iyoyo ndinozonzwa chimwe chichindibata mazamu angu. Zvinondinetsa zvakanyanya nekuti murume wangu akafa makore manomwe apfuura,” anodaro.Rita Simali anoti nguva zhinji anomuka asisina chipfeko chemukati.
“Ndinomuka ndoona ndisisina chipfeko changu chemukati ndichinzwa kuneta. Izvi zvaitika kwemavhiki mana apfuura. Ndakarara ndinonzwa zvakare chinhu chinoyamwa mazamu angu, izvi zvinoitika chero ndakarara nemurume wangu. Tapedza mari yakawanda tichida kubatsirwa nevechivanhu kuti zvinhu izvi zvibve asi zviri kuramba,” anodaro Simali.
Anoti nekuda kwekushinhiwa naye nezvaasingaone uku, haachagutswa nemurume wake.
“Kare ndaimbogutswa nemurume wangu asi kubva nyoka iyi yakatanga kushinha neni, handichaguti. Ndatova nedambudziko nekuti pari zvino murume wangu ava kuchema-chema.
“Pamusoro pazvo, ndinomuka ndakaguswa vhudzi,” anodaro.
Sadunhu Duvert Ndlovu vanotsinhira nyaya iyi vachiti madzimai anosvika 600 anopupura kuti ari kushinhwa nawo nenyoka iyo inodaidzwa kuti Bornwell.
Nyoka iyi vanoti yakazouraiwa ikachererwa pasi
Vanoti mudunhu mavo mune misha inosvika 695 uye misha yese iyi yakabvisa $3 pamusha mumwe nemumwe kuti nyoka iyi ibatwe.